Mi Mix2နှင့် Mi 8 တွင် Mi Mix3ကင်မရာရှိမည်။ သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုရှင်းပြသည် Androidsis
Xiaomi နှင့်အတူတရုတ်အိမ်၏ထုတ်ကုန်သစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောသက်ရောက်မှုပြီးနောက် mi ရောသမ 3အများစုသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများကြောင့်ရရှိသောချီးမွမ်းခြင်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာ 10 GB RAM memory နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်ဝါကြွားခြင်းဖြစ်သည်။
မိုဘိုင်း၏နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုမှာ၎င်း၏ကင်မရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်ပုံ၏ module နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည် မိုင် 8 နှင့် Mi 2S ရောထွေးပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုးတက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ဖော်ပြပြီးသောကိရိယာများထက်ဓာတ်ပုံများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ နောက်ရှင်းပြပါမယ် ဒီပစ္စည်းတွေမှာဒီ flagship အသစ်ရဲ့ကင်မရာကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ.
မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့သည် Weibo မှတစ်ဆင့်, Que ဤအဆိပ်ကမ်းများ၏အာရုံခံကိရိယာကိုအဓိက update ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် Mi Mix3မှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်တိုးတက်မှုများကို၎င်းတို့အားခံစားခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ကိုမဖော်ပြရသေးသည့်အတွက်၎င်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အတိအကျမသိရသေးသော်လည်းမကြာမီရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Mi3နှင့် Mi Mix 8S တွင် Mi Mix2၏ကင်မရာမည်သို့ရမည်နည်း
ရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်ဤအရာကိုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Xiaomi မှသက်ဆိုင်သောကောင်းမွန်သောပြုပြင်မှုများဖြင့် update ကိုထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် အပ်ဒိတ်သည်ဤမော်ဒယ်များကိုကိုယ်တိုင်လက်လှမ်းမီသလားစစ်ဆေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါက။
၎င်းကို OTA မှတဆင့်ဖြန့်ဝေလိမ့်မည်, များသောအားဖြင့်ပြုသည်နှင့်၎င်းသည်အခြားပြုပြင်မှုများနှင့်အတူပါ ၀ င်သကဲ့သို့ MB ၏အတော်အတန်ပမာဏရှိသည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်၎င်းသည်အချိန်ကိုယူနိုင်သောကြောင့်တတ်နိုင်သမျှ load လုပ်ထားရမည်။ Package တစ်ခုလုံးကို data plan မဖြည့်ဘဲ download လုပ်ရန် Wi-Fi network သို့ချိတ်ဆက်ထားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်မှုများထည့်သွင်းထားပါကကျွန်ုပ်တို့ Mi 8 သို့မဟုတ် Mi Mix 2S ၏ကင်မရာကိုအသုံးပြုရုံသာမက Mi Mix3၏ကင်မရာဆော့ဖ်ဝဲ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရမည်။ ဒီအတွက်ငါတို့ခဏစောင့်ရမယ်. တောင်စောင်းများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Mi3နှင့် Mi Mix 8S တွင် Xiaomi Mi Mix2ကင်မရာရှိရန်